Rock crystal - Macdanta silicon dioxide - Formula SiO 2 - Video
Tags crystal, Quartz, dhagaxayga weyn
Iibso dukaankayaga "quartz crystal dhagaxa dabiiciga ah" dabiiciga ah
Quartz Pure waxaa caadi ahaan loo yaqaan 'crystal crystal or quartz. Waa mid aan midab lahayn oo hufan.
Rock crystal waa macdanta silikoon dioxide. Formula SiO 2. Silica waxay dhalaalaysaa qaabka quartada. Ku saabsan 14% ee qolofta dhulka. Laga soo bilaabo qoyska of quartz crystalline crystalline. Waxay ku jirtaa qaabab weyn oo aan muuqaal lahayn. Sidaa daraadeed waa mid ka mid ah dhagaxyada sayniska ee daaweynta lithoterapy.
By habka hydrothermal, quartzka ugu quruxda badani waxay ku dhawaaqaan dildilaaca. Waxay dillaacdaa dhagaxyada hodanka ku ah silica. Sidaa awgeed magaca qolofta dhagax.
Quartz waxaa inta badan la socda macdano kale. feldspars (albite, duuban, midow) iyo sidoo kale calcite. Quruxda kalluumeysiga waxay kuxirantahay jarjar dhagax ah. Inta badan heerkulka xalalka hydrothermal. Waxay ka sarreeyaan, sidoo kale waa qurux badan oo hufan waxay noqon doonaan. Waxaa badanaa loo qaabeeyaa kooxo si kasta. Sidaa daraadeed shaashad of karkhammar ee quartz oo ku dayashada chrysanthemums.
Quartz qaarkood waxay ka kooban yihiin macdano kala duwan oo ah qaabka ka midka ah. Waxaa jira cirbado shucaac ah, sidoo kale tourmaline, amphibole, ama isbaarada yaryar. Midabaynta kareemooyinka qaarkood waxay sabab u tahay joogitaanka raadadka Elements. Sida oxides iron, sidoo kale manganese, ama ka mid ah macdanta kale.
Rock Crystal quartz, ka Takeo, Cambodia
Quartz waxay kuxirantahay nidaamka qumman ee trigonal. Noocka ugu fiican ee kareemku waa naqshad lixaad leh. Iyadoo leh gabayada lixda dhinac ah dhinac kasta.
In dabiiciga quartes dabiiciga ah ayaa inta badan lab ah. Iyada oo laba mataano ah oo gacan labanlaab ah iyo bidhaamo-gacmeed, ayaa sidoo kale la jahawareersan yahay, ama si aad u dhib badan. Iyada oo karkhado ku dhow ee quartz. Ama macdano kaleba sida ay u muujiyaan kaliya qeyb ka mid ah qaabkan. Ama in aan la helin waji cad oo muuqaal ah oo muuqda.
Waxaa intaa dheer, kristensar-ka si wanaagsan loo sameeyay ayaa sida caadiga ah ka dhigaya xannibaadda 'sariir' kobcitaan aan waxba tarayn. Caadi ahaan burcadbadeeddu waxay ku xiran yihiin dhammaadka kale ee loo yaqaan 'Matrix'. Sidoo kale kaliya hal ereyga joojinta ayaa la joogaa. Si kastaba ha noqotee, kareemada laba-cilladu ka baxday waxay dhacaan marka ay si xor ah u kobcinayaan iyada oo aan la lifaaqin. Tusaale ahaan gudaha gypsum. Goob jarribaad waa xaalad sidan oo kale oo ah meel bannaan oo qotodheer ah. Waxaa kuxirnaa sariir of crystals tilmaamaya gudaha.